Author Topic: Dhibaatooyinka Aragga (Vision Problems) (Read 33679 times)
« on: April 09, 2008, 12:42:46 AM »
Ishu waxay ka sameysan tahay saddex qaybood.
• Qaybta cad iyo bikaacda oo iftiinka ku duwa xagga hore ee isha.
• Xuubka dambe (retina), oo ah xuub iftiinka dareema oo ku yaalla xagga dambe ee isha,
• iyo dareemeyaasha aragga (Optic Nerves), oo ah tiro badan oo ah xarko isgaarsiin oo taga maskaxda.
Dad badan ayaa leh dhibaatooyin aragga ah oo u baahan inay gashadaan muraayadaha indhaha ama lensiska indhaha (contact lenses). Saddex dhibaato ee aragga ee ugu tirada badani waa:
Magaca dhakhaatiirtu u yaqaanaan fogaan aragga waa ‘hypermetropia’. Dadka leh fogaan aragga waxa dhib ku ah aragga waxyaabaha u dhaw. Sababta taa keenaysaa waxa weeye kubbadda isha oo aad u gaaban, taasoo keenaysa in falaaraha iftiinka ee ku wareegsan walxaha la arko ay gaaran xagga dambe ee xuubka isha (retina) ka hor intaan qaybta cad (cornea) iyo lensisku qaloocin falaaraha iftiinka.
Fogaan araggu waxa uu badanaa sii xumaadaa marka aad sii gabowdid, waxa kale oo uu saameyn karaa habka aad u aragtid walxaha fogfog. Dadka leh fogaan arag waxay badanaa u baahan yihiin inay xirtaan muraayado sixid arag sida muraayadaha indhaha ama lensiska indhaha si ay wax u akhriyaan, u qoraan una qabtaan hawlo faahfaahsan.
Magaca dhakhaatiirtu u yaqaanaan dhawaan aragga waa ‘Myopia’. Dadka qaba dhawaan aragga waxa dhib ku ah aragga waxyaabaha ka fogfog sababta oo ah kubbadda isha ayaa aad u dheer. Tani waxaa loogu jeeda in qiyaasta ay isku jiraan qeybta kore ee isha iyo xubka danbe (retina) ayaa kala dheer. Markii aan shey fiirino, iftiinka wuxuu soo maraa isha wuxuuna gaaraa xubka danbe. Haddii qeybta hore e isha aad uga fog tahay xubka danbe iftiinka wuxuu istaaga qeybta hore e xubka danbe intii u xubka danbe gabigiisaba iftiimi lahaa, taaso dhibaateeynaaya in waxyaabaha fog fog si fiican loo arko.
Dadka qaba dhawaan aragga waxay badanaa u baahan yihiin inay xirtaan muraayado sixid arag sida muraayadaha indhaha ama lensiska indhaha si ay baabuur u wadaan una qabtaan hawlaha shaqo ku leh eegista waxyaabaha fogfog. Dhawaan aragga waxa marmarka qaarkood lagu daweeyaa qalitaan laysar.
Cawarnaantu (Astigmatism) waa marka isha qaybta caddi aanay si siman u sameysnayn, taasoo keenaysa in iftiinku ku kulmo qaybaha qaarkood ee shay, laakiin aanuu dhamaan shayga ku kulmin. Dadka aan wax dhib ah aragga ka qabin qaybta cad ee ishoodu waxay leedahay qaab ah kubbadda koleyga, halka dadka qaba cawarnaan uu qaabka isha qabteeda caddi ay leedahay qaab ah kubbadda rugby-da.
Arag bar ah
Qof leh arag bar ah ama arag si daran u hooseeya waxa uu leeyahay arag si daran u hooseeya laakiin ma indho la’. Waxa tan uu Ururka Caafimaadka Adduunku ku qeexay (World Health Organisation) qofka aan si cad u arki karin inta farood ee la tusay ee u jira fogaan ah 6 mitir ama ka yar (xiitaa isagoo gashan muraayadaha indhaha ama lensis).
Qofka indho li’i waxa uu qabaa lumid arag oo aad u daran mana awoodi karo inuu si cad u arko inta farood ee laga tusay fogaan ah saddex mitir ama ka yar (xiitaa isagoo gashan muraayadaha indhaha ama lensis). Hase yeeshee, waxa laga yaabaa inuu wali leeyahay xoogaa ah arag ama iftiinka uu dareemi karo.
Halkaan ka akhriso qoraal kale: Sidee U Xifdiyaa Araggayga?
Wixii su'aalo ah oo ku saabsaan casharkaan iigu soo dir halkaan: http://somalidoc.com/smf/index.php?board=31.0
Views: 8417 December 01, 2011, 12:32:03 PM
Views: 8526 April 03, 2016, 10:41:02 PM
Views: 74910 June 05, 2011, 06:41:43 PM
Su'aal: Sigaarka dhibaatooyinka laga dhaxlo?
Views: 2693 March 25, 2016, 08:03:03 PM
Dhibaatooyinka Daawashada Filimaanta Jinsiga!
Views: 35048 December 14, 2016, 10:53:28 PM